Akụkọ - Chọrọ ike ọzọ, mana ọsịsọ? Ihe ohuru ohuru nke GaN na-ekwu na o nwere ike ịnaputa
Oge ị na-agagharị brik brik buru ibu na ọtụtụ eriri iji mee ka ngwaọrụ gị tụgharịa nwere ike ịbụ na njedebe. Ichere oge ka ekwentị gị ma ọ bụ laptọọpụ na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụ iju gị anya site na chaja dị egwu, nwekwara ike ịbụ ihe gara aga. GaN teknụzụ dị ebe a ma ọ na-ekwe nkwa ime ka ihe niile ka mma
"Silicon na-eru oke ya n'ihe gbasara arụmọrụ na ọkwa ike," Graham Robertson, ọnụ na-ekwuchitere ya gwara Digital Trends. "Yabụ, anyị tinyere teknụzụ GaN, nke bụ mmewere 31 yana ihe mejupụtara 7 iji mee gallium nitride."
"Silicon na-eru ókè ya n'ihe banyere arụmọrụ na ike etoju."
Akụkụ "GaN" nke GaNFast na-anọchite maka gallium nitride, akụkụ "Ngwa ngwa ngwa" na-egosi oke ọsọ ọsọ. Navitas Semiconductors na-eji ihe a na Power ICs ya (ike njikwa njikọta ike), nke ọ na-eresị ndị na-emepụta chaja.
"Anyị na-etinye akwa na wafer silicon ọdịnala na nke ahụ na-arụ ọrụ na ogo ọhụrụ na ọsọ ọsọ ọsọ, arụmọrụ ka ukwuu, na njupụta dị elu," ka Robertson kwuru.
Ike ebutela isi ọwụwa maka obere elektrọnik site n'otu ụbọchị. N'agbanyeghị ọsọ ọsọ nke ọhụrụ na teknụzụ ụwa, anyị ejirila otu batrị lithium-ion, yana njedebe ha niile, maka afọ 25 ugbu a. Nke ahụ pụtara na ọtụtụ obere obere ngwaọrụ anyị nwere ike ịga otu ụbọchị na-agaghị etinye ya.
Ebe anyi huru otutu ihe ohuru n'ime afo ndi a bu na nbido ngwa ngwa ngwa ngwa, ma naputa otutu ike na chaja omenala choro ka ha buru oke ma meputa otutu oku, nke bu oku eletrik. Dabere na Navitas, GaNFast Power ICs na-enye 3x ikike dị elu karị, pasent 40 ka ukwuu nchekwa nchekwa, yana 20 pasent obere ụgwọ usoro.
Ha dakọtara na nkọwapụta Ndenye Ndenye Qualcomm 4.0 nkọwapụta, nke bụ ụkọ ugbu a, ma ha kwesịrị itinye aka na awa ise nke ndụ batrị site na nkeji ise nke ịkwụ ụgwọ. GaNFast na-arụkwa ọrụ nkọwapụta nnyefe Ike, nke bụ ekwentị ọkọlọtọ dịka Pixel 3 nke Google na laptọọpụ dị ka Dell's XPS 13 na-adabere. Agbanyeghị, ọ dị mma ịkọba na ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike ịnye ma ọ bụ QC 4.0 ma ọ bụ PD, ọ bụghị ma nke ahụ na-agbaji nkọwa USB-C PD.